I-Semalt Expert ichaza i-Top 10 Spammers ye-World7 2017 Ukuze Uhlale Ukhuselekile
Izigidi zabasebenzisi be-intanethi zixhala malunga nogaxekile imihla ngemihla. Ngomntu onolwazi olufanelekileyo, nayiphi na i-imeyile entsha kwibhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi ebhokisini. Izibalo zibonisa ukuba ugaxekile usasazeka nge-imeyile. NgoNovemba ka-2016, imiyalezo yogaxekile yayingama-61.66 ekhulwini lwe-imeyile ye-traffic emhlabeni jikelele. Oku kuthetha ukuba ii-imeyli ezingama-82 ze-spam zijikeleza ihlabathi ngosuku - mejor servicio hosting peru. Oku kunokukutshitshisa ukuba malunga ne-80 ekhulwini ye-spam yenziwe yiqela elincinci leengxowankulu zengxowankulu.
UFrank Abagnale, uMphathi weNtengo kaMthengi we-10 (Semalt , uchaza i-spammers ephezulu yehlabathi ngo-2017 ukuze uhlale ukhuselekile.
I-Pharmacy yaseKhanada mhlawumbi i-generator generic spam generator. Kukholelwa ukuba kusekelwe eUkraine / eRashiya, kwaye isebenzisa ubuchule obuhlukahlukeneyo be-botnet kunye ne-Chinese web hosting kwiinkonzo ze-clog kwaye zisasaza 'i-pharma spam'. Kwizigidi zeempepha zithumela imihla ngemihla, i-Pharmacy yaseCanada ixhumisa ngokwayo njengowona mthombo ongcono kakhulu wee-painkillers kunye nezidakamizwa zokuphucula izidakamizwa.
2. UMichael Boehm kunye nabaNxulumene
Le nhlangano ye-snowshoe spam ehlala ixesha elide esebenza phantsi kwamagama amaninzi ahlukeneyo kunye namashishini. Isebenzisa iindidi ezahlukileyo, ezizenzekelayo kunye ne-VPS yokusingatha i-IPs ukuqhuba imiqulu emikhulu ye-spam.
3. Yair Shalev (i-Kobeni Solutions)
I-Hardcore snowshoe spammer I-Kobeni Solutions isekelwe eFlorida kwaye ikholelwa ekubeni yintsebenziswano-nolwaphulo-mthetho kaDarrin Wohl, umenzi-spammer owaziwa yiROKSO. Ngo-2014, u-Yair Shalev wabulelwa ukuba ahlawule ama-dollar ayi-350,000 kwiintlawulo ze-Federal Trade Commission (i-FTC) kwisitulo esamnqamle ukuthumela i-imeyli yogaxekile kubasebenzisi ngexesha lokugqitywa kwe-Obamacare. Kwii-imeyile, wayelumkise abafumana ukuba ukuba abanakukukhawulela ikhonkco enikeziwe ngokukhawuleza ukuba bathenge isicwangciso se-inshurensi, baya kuphula umthetho.
4. UDante Jimenez we-Aiming Invest
Lo spammer usebenza kunye nezinye ze-botnet spammers ezimbi kakhulu. Bonke kunye nabalingani bakhe, uDante usebenzisa ama-server angenanto kunye nabaphathi be-phony eMpuma Yurophu ukwenza i-botnet spamming enkulu.
5. Alvin Slocombe (IiNkonzo ze-Internet ze-Cyber ​​World)
U-Alvin Slocombe uhlalutya ngokusetyenziswa kweenombolo ezinxulumene ne-Brand 4 Marketing, Network Traffic Network, i-Ad Media Plus, i-eBox, kunye ne-RCM Delivery. kwiindawo ezahlukeneyo zokubeka esweni kunye ne-arhente.
6. UMichael Lindsay (iMedia Networks)
i-iMedia Networks ngumlindi weLindsay onobuchule bokusebenza kwe-spamming. Isebenza ngokubamba iqhosha lokubamba i-bulletproof kubamba kwi-ROKSO e-listed list of cybercriminals. Abathengi baseLindsay kunye neMedia Networks basebenzisa i-botnet zombies baze bamkele ukulayishwa kwama-spam kwi-offshore. Le spammer kunye neqela lakhe leqhwaba liba idilesi ze-IP indawo kwiinkampani ixesha elide kunye nokusebenzisa le ndawo ukuze igaxekile.
7. UPeterera Severa (uPeter Levashov)
Le ngxelo ye-cybercriminal yaseRashiya iyaziwa ngokuba phakathi kwexesha elide kakhulu logaxekile. Ubungcali bakhe bubhaliweyo nokuthengisa i-spamware kunye nokufikelela kwe-botnet. Uyakrokrelwa ukuba abe negalelo ekudaleni nasekukhululeni i-trojans kunye neentsholongwane. I-Severa inxulumene nabantu abaninzi base-US kunye neMpuma ye-botnet spammers. Wayeyintsebenziswano ka-Alan Ralsky, onetyala lokubulala i-American spammer.
Ngokusekelwe kunye nokukholelwa ukuba kuqhutywe eHuntington Beach, eU.SA, iRR Media yindlalifa ephezulu yogaxekile osebenzisa amagama ahlukeneyo ukuba enze imisebenzi yayo yogaxekile. Ukugula kwayo kubandakanya ukuthunyelwa kwee-imeyile ezingafunekiyo kubantwana ababethengisa utywala kunye nokugembula.
9. UMichael A. Persaud
UMichael wagwetywa ngoFebhuwari kulo nyaka emva kokuba efunyanwe ukuba unxulumene nobuqhetseba benethiwekhi yentsebenziswano yokupaka. I-nyhalamenti ithi le spammer isebenzisa i-snowshoe spamming (isebenzisa ii-domains ezininzi kunye ne-IPs) ukuthumela izigidi ze-imeyile ze-spam ngaphantsi kwee-unxibelelwano ezili-9.
10. Yambo Financial
Le ntlangano enobungozi i-spam isebenza phantse zonke iintlobo ze-spamming. Ingena kwiinkonzo zikawonkewonke, zithatha kwaye zixhaphaze ukukhuthaza isofthiwe engalunganga kunye neyeza kunye nokusabalalisa umntwana, ukulalana okungabantwana kunye neentlobo zoonografi. U-spammer wase-Ukraine uthi unika "iinkonzo zemali".
Xa ugaxekile ugaxekile kunye nogaxekile usebenzisa iindlela ezininzi ezintle ezifana neebhentshi, wonke umsebenzisi we-intanethi kufuneka aqikelele kakhulu xa ekhompyutheni. Kuhle ukuphuhlisa nokugcina enye inqanaba lokungathemba xa uvula ii-imeyile ezintsha kuba uninzi logaxekile uthunyelwa nge-imeyile. Awufuni ukuxhamla kwixhoba lalapha ngasentla okanye nayiphi na enye i-spammers.